Warbixin : Mareykanka oo qeyb ahaan joojinaya taageeradii dhaqaale Ee ee uu siin jiray Masar [Video].
Thursday August 24, 2017 - 15:04:15 in Wararka by Super Admin
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qeyb ahaan joojineyso taageeradii dhaqaale ee sanad walba ay siin jirtay Nidaamka kaligii taliska ah ee dalka Masar ee uu hogaamiyo Korneyl Cabdul fataax Al-siisi.
Mareykanka ayaa sanad walba wuxuu Dowladda Masar uu siiyaa lacag ka badan hal bilyan oo Doollar, waxaana qoraal kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu sheegay in Xukuumadda Washitong ay joojineyso 290 Milyan oo Doollar oo qeyb ka ah lacagtaasi.
Xukuumadda Washintong ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay sida Dowladda Masar ay uga gaabisay inay horumar ka sameyso waxa ay ugu yeertay arrimaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi.
Laakiin Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa soo saartay Bayaan ay uga hadleyso tallaabta ay qaadday dowladda Mareykanka, iyadoona go’aanka Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid aan laga fiirsan.
Taageerada dhaqaale ee Dowladda Mareykanka ay siiso Dalka Masar ayaa soo billaabatay bartamihii qaranigii lasoo dhaafay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii uu soo dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida, iyadoona sababta ugu weyn ee Mareykanka uu dhaqaalaha xooggani ugu bixinayo dalka Masar ay tahay booska istaraatiijiyadeed ee dalkaasi uu ku yaallo iyo xuduudda uu la wadaago Maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Filastiin.
Maamulladii isaga dambeeyay talada dalka Mareykanka ayaa sanadihii lasoo dhaafay Balaayiin Doollar waxay siinayeen Xukuumadihii soo maray dalka Masar, si ay usii kordhiyaan cadaadiska iyo caburinta ay ku hayaan Shacabka Muslimka ah ee dalka Masar, waxaana reer galbeedka iyo xulafadooda ay dareensanyihiin khatarta soo wajihi karta Yahuudda haddii ay kacdoomaan Shacabka Muslimka ah ee dalkaasi ku nool.
1979-kii markii qalinka lagu duugay heshiiskii loogu magac daray Kamp David ayaa Madaxweynihii xiligaas ee dalka Mareykanka Jem Karter wuxuu amray in dowladda Masar loogu deeqo lacagtii ugu badneyd abid ee Dowladda Masar ay siiso Nidaamka daba dhilifka ah ee dalka Masar.
Taageerada uu Mareykanku siiyo Dowladda Masar ayaa waxay isugu jirtaa mid dhaqaale iyo mid Meliteri, iyadoo Hal bilyan iyo 300 oo Milyan oo Doollar uu Mareykanku sanad walba ku taageero Meliteriga dalka Masar, halka 800 oo Milyan oo Doollarna lagu kaabo Xukuumadda daba dhilifka ee dalkaasi ka talisa.